Wasaaradda Waxbarashada XFS oo Macalimiin tababar ugu soo xirtay Muqdisho | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasaaradda Waxbarashada XFS oo Macalimiin tababar ugu soo xirtay Muqdisho
Wasaaradda Waxbarashada XFS oo Macalimiin tababar ugu soo xirtay Muqdisho
Muqdisho(SNTV);- Xarunta jaamacadda Ummadda ee Magaalada Muqdisho ayaa maanta tababar loogu soo gaba gabeeyay ilaa 100 Macallim oo wax ka dhigi doona dugsiyo ku yaala Gobolka Banaadir.
Tababarkan loo qabtay 100-kan macallim ayaa socday muddo 12 maalmood ah, waxaana mushaarka macalimiintan bixinaya Dowladda Federaalka Soomaaliya, iyadoona tababarkan ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya.
Munaasabadda lagu soo gaba gabeynayay tababarkan ayaa waxaa ka qeyb galay agaasimaha guud ee Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliin Sare Soomaaliya Xassan Maxamed Cali iyo xubno ka tirsan Dowladda Federaalka.
Madaxa tababarka macalimiinta wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdulahi Cismaan oo hadal ka jeediyay munaasabadda ayaa kula dardaarmay macalimiinta inay ka soo dhalaalaan howsha loo xil saaray.
Previous articleMareykanka oo caawimaadka dhaqaale ka joojiyay Falastiin
Next articleTababar ku saabsan Waxbarashada Madaniga ee dib-u-eegista Dastuurka oo ka furmay Cadaado